घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सर्वनाम उपनामद्वारा जान्छ; "काला Panther"। हाम्रो जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाताको लागि ल्याउँछ। विश्लेषणमा आफ्नो जीवन कथा, प्रसिद्धि, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ-पिच तथ्याङ्कहरू पहिले नै उनको बारेमा चिनिनु भन्दा पहिलेको कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले 2014 वर्ल्ड कपमा उनीहरूको पिच सामरिक जानकारीको बारेमा जान्दछन्। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू जोएल क्याम्पबेलको जैवको बारेमा धेरै जान्दछन् जो धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
जोएल नाथनील क्याम्पबेल सामुल्स जून 26 को 1992th दिन मा जन्मेका थिए, उनको आमा, रोक्साना समुल्स र पिता, हिसोटो क्याम्पबेल को सैन जोस, कोस्टा रिका मा।
दुवै आमाबाबुले चित्रण गरी पहिले फुटबलरहरू एक-अर्कालाई थाहा पाएका थिए र उनीहरूको साथमा ल्याइएको फुटबलको सुन्दर खेलमा धन्यवाद मागे।
जब हम्बोटो क्याम्पबेल र रोक्साना सामुुले आफ्नो चार सन्तानका तेस्रो सन्तान जन्मे (योएल), एक साधारण कारणको लागि डोना रोक्सानाको द्वारमा फुटबल फुटबलको जीन। तिनीहरूको प्रिय छोरा जोएल क्याम्पबेल रोक्साना सामुुले परिवारको लागि पाँचौं पीढी फुटबलको रूपमा जन्मियो जसले आफ्नो फुटबल फुटबल प्रतिबद्धताको 4th पीढी प्रस्तुत गर्यो। Roxana सैमल्स (जोएल कैंम्पबेल को माम) मुख्य कारण हो किन फुटबल उनको छोरा को डीएनए मा छ। दिनहरूमा, उनीहरूलाई भनिन्छ Pelela, विवेकमा, बेशक, पौष्टिक ब्राजीललाई एडसन एन्ट्रेन्स डो नास्मेन्टियो, पेले। उनले धेरै गोल गरे जस्तै पेल उनको समयमा।
Roxana, एक पल्ट जोर दिए कि योएल उनको छोरो फुटपाथ मा उनको गर्भ देखि शिक्षित गरिएको थियो जसलाई उनले कडा तरिकाले पकडे। उनले थप बताए कि जन्ममा, उनले आफ्नो पहिलो शब्दहरू बेबेल गर्न सक्षम भए तापनि योएलले पहिले नै थाहा पाएको थियो कि कसरी फुटबलमा मुस्कान र फर्म फिक्री राख्ने। निरन्तर मुस्कुराउने क्षमता भनेको यो गुण हो जुन योएल र तिनका भाइहरू, जुनियर हम्बरटो, क्याथरीन र निक्षा, उनीहरूका पिता डन हम्बरटोबाट जन्मिएका थिए। आमाबाबुहरू ईश्वरीय मसीहीहरू हुन् र आफ्ना छोराछोरीहरू जस्तै जस्तै हुन्थे। क्याम्पबेल तिनका तीन बहिनीहरू (माथि उल्लेखित नामहरू) सँग बसीरहेका थिए।
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
एक फुटबल परिवारको एक छोराको रूपमा, बल सधैं तिनको डीएनएको मौलिक भाग थियो। यो यस्तो बुखार थियो कि जवान युवतीले दुई बल गरे। त्यहाँ एक अतिरिक्त बल्ला थियो जसमा उनले बसमा राखेपछि अर्को एक छतमा वा केही असहज पड़ोसीको बगैंचामा बग्यो, जसले बललाई फर्काउन अस्वीकार गर्यो। यस समयमा, जोएल क्याम्पबेल चार वर्षको थियो।
क्याम्पबेलको फुटबल जीन त्यो बच्चा हुनुहुन्थ्यो। हम्बर्टो, उनको बुबाले नै पहिलो पटक नै क्याम्पबेलको लागि आवश्यक पर्खाइ र समर्पणको फुटबल मूल्यहरू सिक्न आवश्यक छ। आमाबाबुको प्रभावबाट असाध्यै, स्कूल जानुभयो क्याम्पबेलले आफ्नो क्यारियरमा राम्रो आधार बनायो। त्यसपछि, उहाँको स्कूलले उनलाई मौका दिएका थिए कि खेलकूदको समयमा खेलकुद खेलकुद खेलकुद प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने खेल खेल्ने। यसले लिनको लागि आफ्नो दृष्टान्तलाई फर्कायो 'फुटबल' एक ट्राफी पल फोटो तल गम्भीर रूपमा देखियो।
योएलले आफ्ना सपनाहरू सत्यको लागि एकदमै दृढ दृढता राखेका थिए र उनको महत्वाकांक्षाहरू मात्र एक गुप्त कल्पना थिएन। क्याम्पबेल सापिसिसा, एक कोस्टा रिकन घरेलू क्लब मा "CValencia को arajillos"स्यान रफेल अब्जे डे डिसाम्पराडोड मा। पछि, आफ्नो युवा क्यारियर को समयमा उसलाई कोचहरु लाई, उनको विरोधियों को लेने को एक महान क्षमता संग एक तेज हमलावर को रूप मा परिभाषित। उहाँसँग धेरै राम्रो डेरिबलिङ कुञ्जीहरू छन् र राम्रो समापनकर्ता हुनुहुन्छ। जोएल क्याम्पबेलले आफ्नो युवा फुटबललाई परिपक्व युवाको रूपमा समाप्त गर्यो।
आफ्नो युवा क्यारियर पूरा गरे पछि योएल ले देशभर वरिपरि आर्सेल्यान्ड स्काउट्स पहिले दुई वरिष्ठ उपस्थित गरे। उनले कथित रूपमा सेन्या र फ्रिरेन्टिनालाई गनर्ससँग साइन इन गर्न उत्प्रेरित गरे।
2011 मा सापासासा को गनर्स ले जाने को बावजूद, स्ट्राइकर ले उनको 2014 वर्ल्ड कप प्रदर्शन को लागि पहिलो टीम को नियमित धन्यवाद को लागी पांच साल पहिले हुनु पर्छ। उनले अझै पनि आर्सेनल फेरि छोडेर ऋण छोडेर क्लबहरूको श्रृंखलाको लागि खेल्ने आनन्द पाएका थिए। क्याम्पबेलको लागि फुटबल सुनको रूख बनेको थियो, एक खेल जहाँ उसले पूर्ति गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
बचपनबाट राह, जोएल उनको अद्भुत प्रदर्शनका लागि धन्यवाद एक नियमित कोस्टारिका सेलिब्रिटी बन्यो। उहाँको क्षमता र क्षमता, साथै पिचबाट उनको जीवनशैली, उनको पूर्ण चित्र बनाउँदछ। सत्य हो, योएल क्याम्पबेलले सुन्दरतालाई प्रेम गर्छ र उहाँले साँच्चै आफ्नो हृदयको लागि उत्तम प्राप्त गर्न आफ्नो समय लिनुभयो।
जोएलले माया मारिन फर्नाण्डा क्यास्सेन्टमा माया पाएका थिए, जसले एकपटक उनको श्रेष्ठको कुरा गरे। उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो स्तरको स्थितिमा वृद्धि भएको हो।
त्यो सुन्दर फर्नाडा भेटिए पछि तुरुन्तै यो समय लागेन योएल क्याम्पबेलले उनी आफ्ना आमाबाबुसँग परिचित भएका थिए जसले तिनीहरूलाई आफ्नो आशीर्वाद, समर्थन र सम्बन्ध सल्लाह दिए।
योएल क्याम्पबेलले फाइनल्यान्डलाई 8 वर्षको मिति दिईयो र उनीहरूले उनीहरूलाई राम्रो र कडा समय दुवैमा एकअर्कासँग मिश्रण गर्ने क्षमताले निर्देशित गरे।
आफ्नो सम्बन्धको XNumxth वर्ष मनाउन पछि, विवाह प्रस्ताव आयो। उनीहरूको विवाह जून 8 मा कोस्टा रिका मा एल्लेसिया डे पोोजोस, डे सांता एनामा आयोजित भएको थियो।
विवाहमा उनको कोस्टा रिकन टोलीका सहभागीहरू थिए येलस्टीन तेजाडे, ब्रायन रुज, र Keylor Navas। जोएल क्याम्पबेल एक अद्भुत विवाहित जीवन को रूप मा प्रकट भएको थियो जब उनि एक पल्ट उनको तस्वीर मा गर्भवती को जश्न मनाते हो।
फर्नाण्डले एक सुन्दर बच्चा केटी जन्माइन् जसको जोडीले ब्रियना क्याम्पबेल नाम गरे। तिनी अझै लेख्ने बिन्दुको रूपमा आफ्नो पहिलो र मात्र बच्चा बन्नेछन्। तल उल्लेएको योएल ब्रायन क्यानाबेल, उनको प्यारी छोरी संग धेरै संलग्न छ।
जोएल क्याम्पबेल भावनात्मक र संवेदनशील छ, र पारिवारिक र उनीहरूको घरको बारेमा गहिराइको हेरविचार गर्दछ।
जोएल क्याम्पबेल, उनको श्रीमती र प्यारी छोरी दुवैको छुट्टीमा विभिन्न सुन्दर प्राकृतिक गन्तव्यहरूमा पर्छन्।
एक सुन्दर पत्नी र एक प्यारा बच्चा भएको निश्चित रूपले क्याम्पबेलले राम्रोको लागि परिवर्तन गरेको छ, यस प्रकार भगवानको नजिक हुन सक्छ। योएलले आफ्नी श्रीमती, आमा र छोरीलाई आफ्नो जीवनको दोस्रो स्तम्भको रूपमा हेर्छन्, पहिलो परमेश्वर परमेश्वरसँग।
रोक्साना सैमल्स, योएलको आमाले बताइन् कि प्रत्येक जोडीको अघि, उनको छोराले भजन 27 पढ्दछन्। आदर्श रूपमा, यस अभ्यासले आफ्नी श्रीमती र आमा दुवैको सिफारिसको रूपमा सुरू गर्यो। यो एक तरिका हो जहाँ कम्पाबेल आफ्नो प्रदर्शनको लागि विश्वास हुन्छ।
भजन 27 भन्छन्; यो प्रभु मेरो ज्योति र मेरो उद्धार हो। म कसलाई डराउँछु? प्रभु मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ। म कसलाई डराउनेछु?
2 जब दुष्ट, मेरा शत्रुहरू र मेरा शत्रुहरू पनि, मेरो मासु खाएर आउँथे, तिनीहरू ठोक्किएका र ढोका।
"विश्राम पाउन बाइबलको भ्रमण गर्नुहोस्!"
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
उहाँका आमाबाबुहरू: "हम्बरको परिवार एक खुसी छ", डोना Roxana घर को आमा भन्छन्। यो जान्न उल्लेखनीय छ कि हम्बर्टो जो पहिले फुटबल गोलकीपर हो जुन अहिले एक सेमान छ र उनको पत्नी (जोएल क्याम्पबेल मा) एक सेवानिवृत्त फुटबलर हो।
क्याम्पबेल परिवारले एक सिद्धान्त छ कि उनीहरूको कुनै पनि ईर्ष्या वा कुनै पनि इशारा गर्दैनन्। "सबै एउटै अवस्थाहरूसँग, समान छन्" भन्छिन् कि बुबाले आफ्नो छोराको फुटबल आचार्य देखेर तल चित्रण गरेका छन्।
जोएल क्याम्पबेलको आमाको बारेमा थप: जोएल क्याम्पबेलको आमा, पूर्व-फुटबलले अटलांटिकको रेड स्टारहरूमा आफ्नो क्यारियर खेल्नुभयो, जो महिला टोली हो जुन उनको पतिले एक-अर्कालाई भेट्नुअघि प्रेम गरे र प्रेममा पसे। Roxana र उनको छोरा कैंम्पबेल दुवै नजिक छन्। तलका बयानमा एक प्रमाण बनाइएको छ।
डना रोक्साना एकपटक यो स्वीकार गरे: "मैले योएललाई बच्चा जन्माउँदा सधैं एक तकियामा भरिएको थिएँ। आज सम्म योएल अझै पनि उनको नजिकैको तकिया छ। उनीहरूलाई जहाँ पनि जान्छ, जहाँ एक प्रिय वस्तु जस्तो हुन्छ। उही तकिया! "
Siblings: "उहाँ एक एथलीट उपलब्धि होइन, न केवल आफ्ना एथलेटिक उपलब्धिहरूका लागि तर यसको भाइबहिनी नजिक रहन र नजिक रहने क्षमताको लागि" मिशेल, उनको चचेरे भाईले भने। जोएल क्याम्पबेल अरूलाई मदत गर्न द्रुत छ, किनकि उहाँ पनि उहाँका ईर्ष्याहरू र साथीहरूसँग संघर्षबाट बच्न छिटो छिटो हुनुहुन्छ।
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत तथ्यहरू
जोएल क्याम्पबेलले घोडाहरू मन पराउँछन् तर डरलाग्दो र डराउँछन्।
क्याम्पबेल एक धेरै लक्जरी जीवन बिताउँछ जुन हामी आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम मार्फत जान सक्छौं। उहाँसँग आफ्नै हेडफोन कम्पनी हो।
विभिन्न कार सवारी सावित, जोएल क्याम्पबेल आफ्नो पाङ्ग्रा कुकुरको एक नजिकको मित्र हो।
यसको सन्दर्भमा बल, क्याम्पबेल हो Tenacious, अत्यधिक कल्पनाशील, वफादार, भावनात्मक र धेरै सहानुभूति।
यसको सन्दर्भमा शौक, क्याम्पबेललाई प्रेम गर्दछ कला, गृह-आधारित शौकहरू, मनपर्नेहरूलाई (विशेष गरी आमाबाबु र बहिनीहरू) लाई सहयोग पुर्याउन, नजिकैको वा पानीमा आराम गर्न, र घरको डेस्कटपको साथ आफ्नो खाली समय समर्पण गर्दछ। मिडिया रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि उनी एक विश्वविद्यालय अनलाइन अनलाइन कार्यक्रममा एक विद्यार्थी हुन्।
के योएल क्याम्पबेल नापसंद: अजनबारी, आफ्नो आमाको कुनै पनि आलोचना र उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जानकारी जारी।
जोएल क्याम्पबेल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -Wierd तथ्यहरू
क्याम्पबेल आफूलाई आफैंको चरित्रको रुपमा लिन्छ। उनले एकपटक प्रसिद्ध रूपमा फुटबल स्टिकरहरूको 100 प्याकेटहरू आफैलाई फेला पारे। दुर्भाग्यवश, उनले गरेनन्।
उनले आफ्ना लक्ष्यहरूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई रिपोर्ट गर्ने तरिकाको रूपमा सलामको साथ मनाउँछिन्। यो कहिलेकाहीँ तल चित्रित रूपमा एक ठूलो उत्सव पछि लागिएको हुन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जोएल क्याम्पबेल पढ्नको लागि धन्यबाद बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
Hirving Lozano बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हामी सबैलाई थाहा छ